Fameno (fitsipiteny) - Wikipedia
Ny fameno dia anjara asan'ny teny (na andian-teny) izay maneho ny fiankinan'io teny io (na io andian-teny io) amin'ny teny na andian-teny iray hafa ao anaty fehezanteny. Ny andian-teny resahina eto dia mety ho tarika na fehezankevitra. Misy karazany maro, arakaraka ny hevitr'ilay fiankinana na ny sokajin-teny iankinan'ilay teny, ny fameno. Mety hisy mpampiankina na tsia mampifadray ireo teny na andian-teny mifameno ireo.
1 Fanasokajiana ny fameno
1.1 Fameno mivantana sy fameno tsy mivantana ...
1.1.1 Fameno mivantana
1.1.2 Fameno tsy mivantana
1.2 Fanasokajiana araka ny loha-tarika
1.2.1 Famenon'ny matoanteny
1.2.2 Famenon'ny mpamaritra
1.2.3 Famenon'ny tambinteny
1.2.4 Famenon'ny mpampiankin-teny
1.2.5 Famenon'ny anarana
1.3 Famenon'anjara asa
1.3.1 Famenon'ny entimilaza
1.3.2 Famenon'ny fehezanteny
1.3.3 Famenon'ny lazaina
1.3.4 Famenon'ny fameno
2 Karazana tsinjara asa fameno
2.1 Fameno zoina
2.1.1 Fameno zoina iharana
2.1.2 Fameno zoina hafa
2.2 Fameno toe-javatra
2.2.1 Fameno toe-javatra milaza toerana
2.2.2 Fameno teo-javatra milaza fotoana
2.2.3 Fameno toe-javatra milaza fomba
2.2.4 Fameno toe-javatra milaza antony
2.2.5 Fameno toe-javatra hafa
2.3 Fameno mpanao
3 Fanakambanana ny anjara asa sy tsinjara asa fameno
4 Endrika sy fandrafetana ny fameno
4.1 Toerana misy ny fameno
4.2 Endrika araka anjara asa fameno
4.2.1 Endrika milaza iharana
4.2.2 Endrika milaza mpandray na tolorana
4.2.3 Endrika milaza tompon-javatra
4.2.4 Endrika milaza toerana
4.2.5 Endrika araka anjara hafa
4.3 Fampiasana mpampiankin-teny
4.3.1 Fameno zoina
4.3.2 Fameno toe-javatra
Fanasokajiana ny famenoHanova
Ny fanasokajiana dia mety ho ara-drafi-piteny na ara-tsokajin-teny na ara-keviteny.
Fameno mivantana sy fameno tsy mivantana ...Hanova
Raha ankinina amin'ny endriky ny fandrafetam-pehezanteny ihany ny fanasokajina dia izao: lazaina hoe "fameno mivantana" raha tsy misy mpampiakina fa "fameno tsy mivantana" raha misy mpampiankina. Raha ankinina amin'ny hevitra indray dia tsy voatery hitady mpampiakina ny fameno tsy mivantana ary tsy voatery ho tsy mivantana ny fameno ahitana mpampiakina. Izany no mitranga eo amin'ny fanasokajiana ny fameno zoina.
Mivantana ny fameno iray raha tsy misy mpampiankin-teny mampitohy ny teny fenoina amin'ny fameno. Ny fameno zoina mivantana dia isan'ireo fameno mivantana, nefa amin'ny fiteny sasany (toy ny fiteny espaniola sy ny fiteny malagasy, ohatra) dia misy fameno zoina mivantana atohin'ny mpampiankin-teny amin'ny matoanteny fenoiny.
Malagasy: Nandresy ny Gaoloà i Jolio Kaisara.
Anglisy: Julius Caesar defeated the Gauls ("Nandresy ny Gaoloà i Jolio Kaisara")
Frantsay: Jules Sésar vainquit les Gaulois ("Nandresy ny Gaoloà i Jolio Kaisara")
Espaniola: Julio César derrotó a los Galos. ("Nandresy ny Gaoloà i Jolio Kaisara")
Malagasy: Mijery ny ankizy izy.
Mijery an'i Joany izy.
Fameno tsy mivantanaHanova
Tsy mivantana ny fameno iray raha misy mpampiankin-teny mampitohy ny teny fenoina amin'ny fameno. Na dia manjavona aza ny mpampiankin-teny mampifandray ny teny raha mpisolo tena no fameno, dia "tsy mivantana" ihany no iantsoana io fameno io. Isan'ny fameno tsy mivantana ny fameno zoina tsy mivantana. Matetika ny fameno zoina tsy iharana dia tsy mivantana.
Malagasy: Miresaka momba ny fampandrosoana izy.
Frantsay: Il parle du développement. ("Miresaka momba ny fampandrosoana izy")
Anglisy: He is talking about development. ("Miresaka momba ny fampandrosoana izy")
Malagasy: Nankany an-tsena izy omaly.
Frantsay: Il est allé au marché hier ("Nankany an-tsena izy").
Anglisy: He went to the market yesterday ("Nankany an-tsena izy").
Fanasokajiana araka ny loha-tarikaHanova
Raha araka ny sokajin-teny iankinana no anasokajiana ny fameno dia misy ny famenon'ny matoanteny, ny famenon'ny anarana, ny famenon'ny mpamari-toetra, ny famenon'ny tambinteny sns.
Ny famenon'ny matoanteny dia fameno tsy azo sarahina amin'ny matoanteny ao anaty fehezanteny. Mety ho fameno zoina na fameno toe-javatra araka ny fitsipiteny mahazatra izany. Amin'izao fotoana iroboroboan'ny haiteny izao dia ampifanoherina amin'ny famenon'ny fehezanteny ny famenon'ny matoanteny. Matetika dia tsy azo afindra toerana ny famenon'ny matoanteny. Io andian-teny foronin'ny matoanteny sy ny famenony io no atao hoe "tarika matoanteny". Araka ity hevi-teny farany ity dia tsy inona ny famenon'ny matoanteny fa ny fameno zoina ihany.
Ny famenon'ny mpamaritra dia teny na andianteny mameno ny mpamaritra ka mety misy na tsy misy mpampiankin-teny manakambana azy amin'ny mpamaritra fenoiny, arakaraka ny fiteny. Ny andian-teny foronin'ny mpamaritra sy ny famenony no atao hoe "tarika mpamaritra".
Ny famenon'ny tambinteny dia teny na andian-teny mameno ny tambinteny ka mety misy na tsy misy mpampiankin-teny manakambana azy amin'ny mpamari-toetra fenoiny, arakaraka ny fiteny. Ny andian-teny foronin'ny tambinteny sy ny famenony no atao hoe "tarika tambinteny".
Ny famenon'ny mpampiankin-teny dia teny mameno ny mpampiankin-teny ka tsy misy mpampiankin-teny hafa manakambana azy roa ireo. Ny andian-teny foronin'ny mpampiankin-teny sy ny famenony no atao hoe "tarika mpampiankin-teny".
Ny famenon'ny anarana dia teny (anarana hafa na mpisolo) izay mameno ny anarana. Ny andian-teny foronin'ny anarana sy ny famenony no atao hoe "tarika anarana".
Raha araka ny anjara asan'ny teny iankinana kosa no anaovana ny fanasokajiana dia misy ny famenon'ny entimilaza sy ny famenon'ny lazaina ary ny famenon'ny fameno. Misy koa ny atao hoe famenon'ny fehezanteny.
Ny famenon'ny entimilaza dia teny atao fameno ho an'ny teny hafa mitana ny anjara asa entimilaza. Ny entimilaza dia matetika matoanteny, nefa arakaraka ny fiteny dia mety ho mpamari-toetra, na anarana na sokajin-teny hafa izany.
Ny famenon'ny fahazanteny dia teny ato fameno ao amin'ny fehezanteny nefa tsy miraikitra amin'ny matoanteny fa azo foanana na afindrafindra toerana. Ny ankamaroan'izay ataon'ny fitsipiteny mahazatra hoe fameno mpamari-toe-javatra dia famenon'ny fehezanteny.
Avec beaucoup de soin, l'araignée tisse sa toile, dans le grenier, chaque jour.
L'araignée tisse sa toile, avec beaucoup de soin, dans le grenier, chaque jour.
Ny famenon'ny lazaina dia teny atao fameno ho an'ny teny hafa mitana ny anjara asa lazaina. Ny lazaina dia matetika anarana na mpisolo tena, nefa arakaraka ny fiteny dia mety ho mpamari-toetra na sokajin-teny hafa.
Ny famenon'ny fameno dia teny mikambana sy miankina amin'ny fameno amin'ny alalan'ny mpampiankin-teny. Ao amin'ny fitsipiteny malagasy ankehitriny dia isan'ny atao hoe "zana-pameno" ny famenon'ny fameno.
Karazana tsinjara asa famenoHanova
Raha ny fifandraisana ara-kevitra ao anaty fehezanteny no banjinina dia misy ny fameno iharana, ny fameno toe-javatra, ny fameno mpanao sns. Ny fanaovana lazaina ny teny misahana ny iray amin'ireo tsinjara asa ireo no miteraka ny atao hoe fitodika sampana.
Ny fameno zoina dia famenon'ny matoanteny izay tsy azo sarahina aminy na afindrafinfdra toerana ao amin'ny fehezanteny. Mety hatohin'ny mpampiankin-teny ilay matoanteny sy ny fameno zoina.
Fameno zoina iharanaHanova
Amin'ny haiteny amin'izao fotoana izao dia karazany iray amin'ny fameno zoina ny fameno iharana izay atao hoe fameno zoina iharana.
Fameno zoina hafaHanova
Ny fameno sasany, izay atao hoe fameno toe-javatra tao amin'ny fitsipiteny mahazatra maro, dia atao hoe fameno zoina amin'ny haiteny ankehitriny arakaraka ny fifandraisany ara-drafi-pehezanteny ao amin'ny fiteny tsirairay.
Ny fameno toe-javatra dia fameno ao amin'ny fehezanteny izay tsy isan'ny fameno zoina. Ao amin'ny fitsipiteny mahazatra dia atao hoe fameno toe-javatra ny fameno rehetra tsy iharana na dia heverina fa famenon'ny matoanteny aza. Amin'ny haiteny amin'izao fotoana izao koa dia tsy misy fameno toe-javatra ankoatry ny famenon'ny fehezanteny.
Fameno toe-javatra milaza toeranaHanova
Près de la véranda, le petit Nicolas joue au football.
En Australie, les kangourous se promènent en liberté.
Ha estacionado la moto en el garaje.
Fameno teo-javatra milaza fotoanaHanova
Fameno toe-javatra milaza fombaHanova
Il viendra rapidement
James answered in English.
Fameno toe-javatra milaza antonyHanova
Ils ont agi par jalousie
Fameno toe-javatra hafaHanova
Ils travaillent pour s'enrichir.
Malgré la pluie, nous continuerons notre voyage.
Il viendra avec un ami.
Ny fameno mpanao dia famenon'ny fehezanteny manondro ny mpanatanteraka ny asa. Rehefa tsy atao lazaina ny mpanao ny asa dia manjary fameno mpanao. Amin'ny fiteny sasany izy dia ampidirin'ny mpampian-kinteny fa amin'ny teny sasany hafa dia afaka mitana io anjara asa io izy na dia tsy misy mpampiakina.
Voasambotry ny saka ilay voalavo.
Nodomin'ny fiara izy.
La souris fut attrapée par le chat. ("Voasambotry ny saka ilay voalavo.")
Il s'est fait renverser par une voiture. ("Nodomin'ny fiara izy.")
Fanakambanana ny anjara asa sy tsinjara asa famenoHanova
Amin'ny fiteny rehetra dia tsy mitovy ny fahafahana mampifameno ny teny na ny andian-teny ao amin'ny fehezanteny ka ao ireo izay tsy afaka manakambana ny anjara asa ara-kevitra (tsinjara asa) sasany amin'ny anjara asa arak'endrika (anjara asa) sasany.
Ohatra, ao amin'ny fiteny frantsay dia tsy maintsy fameno ny toe-javatra nefa ao amin'ny fiteny malagasy dia azo atao lazaina ny toe-javatra; ao amin'ny teny frantsay, amin'ny matoanteny sasany, dia tsy azo atao afa-tsy fameno ny anjara asa ara-keviny sasany toy ny zoina (frantsay: objet) ka ahazoana ny hoe "fameno zoina mivantana" (frantsay: complement d'objet direct) na "fameno zoina tsy mivantana" (frantsay: complement d'objet indirect).
Endrika sy fandrafetana ny famenoHanova
Misy karazany efatra ny fomba isahanan'ny teny iray ny anjara asa fameno: amin'ny alalan'ny toerana misy azy, amin'ny alalan'ny tsirinteny miovaova araka ny anjara asa, amin'ny alalan'ny fampiasana mpampiankina na amin'ny fanakambanana ny roa amin'ireo fomba telo ireo na fanakambanana azy telo.
Toerana misy ny famenoHanova
Endrika araka anjara asa famenoHanova
Maro ny fiteny manovaova ny endriky ny teny atao fameno arakaraka ny anjara asa sahanin'io teny io. Izany no atao hoe endrika araka anjara asa na kaso. Tsy ny sokajin-teny rehetra azo atao fameno no afaka miovaova endrika araka ny anjara asa sahaniny ao amin'ny tarika na ny fehezanteny, ary tsy ny fiteny rehetra no afaka manovaova ny teny ao aminy araka ny anjara asan'io teny io. Raha lazaina ny anjara asan'ny teny dia ny endrika lazaina no isehoan'io teny io ao amin'ny fehezanteny. Raha fameno koasa ny anjara asan'ny teny dia mety hiseho amin'ny endrika milaza iharana na endrika milaza mpandray na endrika milaza tompon-javatra sns ilay teny.
Endrika milaza iharanaHanova
Endrika milaza mpandray na toloranaHanova
Endrika milaza tompon-javatraHanova
Endrika milaza toeranaHanova
Endrika araka anjara hafaHanova
Endrika milaza fialana
Endrika milaza fitaovana
Endrika milaza antony
Endrika milaza fomba
Na ny fiteny afaka manovaova ny endriky ny teny ao aminy arakaraka ny anjara asa sahaniny, na ireo fiteny tsy afaka manao izany dia matetika mampiasa mpampiankin-teny mba hahatandrify tsara ny anjara asa kendrena ho sahanin'ny teny atao fameno.
Fameno zoina iharana
Fameno zoina hafa
Fameno toe-javatra milaza toerana
Fameno teo-javatra milaza fotoana
Fameno toe-javatra milaza fomba
Fameno toe-javatra milaza antony
Fameno toe-javatra hafa
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fameno_(fitsipiteny)&oldid=978839"
Dernière modification le 29 Desambra 2019, à 04:11
Voaova farany tamin'ny 29 Desambra 2019 amin'ny 04:11 ity pejy ity.